Senatera Berthin Randriamihaingo-« TENA MIASA NY FITONDRANA » -
AccueilRaharaham-pirenenaSenatera Berthin Randriamihaingo-« TENA MIASA NY FITONDRANA »
07/02/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Berthin Randriamihaingo. Teny amin’ny tontolon’ny rallye no tena nahafantaran’ny maro azy. Amin’izao fotoana, loholon’i Madagasikara i Berthin Randriamihaingo ary manohana ny fitondrana amin’ny alalan’ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM). Milaza sy mizara ny heviny izy mikasika ny toe-draharaham-pirenena. Aminy, amin’ny maha senatera azy, miasa ary tena miasa ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao. Resadresaka…
Gazety Triatra (+): Andriamatoa senateran’i Madagasikara, Berthin Randriamihaingo, inona moa no tena asanareo amin’ireo distrika sahaninareo na hiandraiketanareo? Tsara mantsy mba ho fantatry ny sarambabem-bahoaka izany.
Berthin Randriamihaingo (-): Marina dia marina tokoa izany. Mbola maro amintsika vahoaka no tsy mahalala ny tena andraikitry ny senatera. Voalohany indrindra aloha, tsara ny manamarika fa misy olom-boafidy ary misy olom-boatendry ny senatera. Manaraka izany, anisan’ny hiandraiketan’ny loholona ny manara-maso ny asan’ny governemanta ary manolo-tsaina azy ireo mikasika ny fampandehanan-draharaham-pirenena. Aorian’izay vao miahy ny “Collectivité décentralisée”. Mijery sy manampy amin’ny endrika be dia be eny ifotony, amin’ny endrika fampandrosoana rehetra, mijery ny olana rehetra ary mitatitra izany amin’ny rafitra mpanatanteraka. Manampy izany, mandroso soso-kevitra ho fanatsarana ny fiainam-bahoaka izay volavolain’ny governemanta izay vao alefa eny anivon’ny parlemantera saingy tsy voatery ho laniana kosa anefa.
(+) Manao ahoana indray kosa ny fahitanao, amin’ny maha loholona anao, ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana izao? Efa azo tarafina ve ankehitriny ny fampandrosoana ny firenena ary mandray anjara mivantana amin’izany ve ianareo?
(-) Eny, tsy azo lavina aloha fa tena sahirana amin’ny lafiny rehetra isika amin’izao fotoana izao. Mbola sarotra ny mifehy ny tsy fandriam-pahalemana, ny angovo, ny fiakaran’ny vidim-piainana, sns. Na izany aza anefa, efa miezaka amin’ny fomba rehetra hifehezana izany olana mianjady izany ny fitondram-panjakana. Amiko manokana, miasa ary tena miasa ny fitondrana. Fa tsy tokony hohadinoina koa anefa fa misy andraikitry ny tsirairay ny fampandrosoana ny firenena fa tsy ny fanjakana ihany. Noho izany, manana andraikitra ary mandray anjara mivantana amin’izany izahay ao amin’ny Antenimieran-doholona. Izany hoe, efa misy kaomisiona mandinika ireo sehatra maro mahakasika ny fiainam-pirenena ireo ao amin’ny Antenimieran-doholona.
Ankoatra izay, tokony miady hatrany anefa ny eo anivon’ny Antenimieran-doholona rehefa mahasoa ny vahoaka. Anisan’izany ny fandaniana ireo volavolan-dalàna mahakasika ireny fotodrafitrasa isan-tokony ireny, sns. Izany dia efa azo lazaina ho fandraisana anjara mivantana ataonay loholon’i Madagasikara.
(+) Misy vahaolana afaka arosonao amin’ny maha loholon’i Madagasikara anao ve amin’ny fanatsarana ny fiainam-pirenena?
(-) Betsaka anie ny vahaolana afaka haroso eny anivon’ny governemanta amin’ny fampandrosoana ny fiainam-pirenena sy ny vahoaka e! Singaniko manokana amin’izany ary tsindriako mafy amin’ny maha Berthin Randriamihaingo ahy, ny tokony hisian’ny fiaraha-midinika mba hivoahan’ny fehin-kevitra amin’ny fitadiavam-bahaolana. Izany hoe, tokony hisy karazana kaomisiona manokana manolo-kevitra eny anivon’ny governemanta mba manamora kokoa ny famahana ny olana mianjady amin’izao fotoana izao. Izaho aloha tena mampirisika ary mampiseho foana ny tokony hisian’io fiaraha-midinika io satria ny hevitry ny maro mahataka-davitra. Miady hatrany amin’ny fampandrosoana isika manomboka eny ifotony (distrika, Faritra, sns). Na izany aza anefa, mahatsapa aho fa manao ary tena miasa ny fitondram-panjakana. Fa te hanome fanamarihana kely anefa izaho hoe mba firy amin’ireo olom-boafidy na voatendry ireo moa no tena sahy mandray andraikitra tokoa amin’ny fampandrosoana fa tsy mialangalana? Tokony ho tompon’andraikitra daholo ny loholona rehetra. Ho ahy manokana mantsy, izaho izao mi-“coaché” distrika maromaro toa an’Atsimondrano, Manjakandriana, Anjozorobe, Ankazobe ary Antananarivo II, ka noho izany anjaranay no mijery sy midinika ny fampandrosoana eny amin’ireny distrika ireny.
(+) Farany, manao ahoana indray ny tanjaky ny antoko HVM amin’iny distrikan’Atsimondrano izay ianao no “coach”-ny? Azo antoka ny fandresena na fampandresena ny filoham-pirenena amin’izao fotoana izao eny Atsimondrano?
(-) Efa misy ny fifandraisana tamin’ireo ben’ny tanàna amin’iny faritra Atsimondrano iny. Efa voafehy ireo kaominina mandrafitra ny distrikan’Atsimondrano amin’izao fotoana izao. Vonona ny hifanome tanana anay loholona amin’ny fampandrosoana sy fanohanana ny fitondrana izy ireo. Efa nifanaiky ary nifanome toky amin’ny fanohanana ireo ben’ny tanàna. Noho izany, miezaka manampy hatrany ireo kaominina amin’ireo distrika sahaniko izaho Berthin Randriamihaingo ary manome ohatra ho an’ireo loholona mbola marisarisa amin’ny fampandrosoana miainga eny ifotony. Tsy manana olana araka izany, ny eny Atsimondrano eo amin’ny fanohanana ary mahazo matoky izany ny fitondram-panjakana.
Dinika nangonin’i MN
Nivoaka tamin’ ny fahanginany ireo raiamandreny mijoro omaly, manoloana ireo fihetsika mihoa-pefy ataon’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana sy ny governemanta. Hatrany am-boalohany tokoa mantsy dia efa hita taratra ny asa tanterahin’ny tompon’ andraikitra voalohany ...Tohiny
Tahiana Rabetokotany : Nahavita fianianana teo anivon’ny Hcc